UNOBANGELA KUNYE NEZIPHUMO ZEZIHLOKO ZESINCOKO: IIMBONO EZILUNGILEYO NGOKWENENE ZE-2020 - IBHLOG
Unobangela kunye neZiphumo zezihloko zeSincoko: Iimbono ezilungileyo ngokwenene ze-2020
Ngaphambi kokuba umenzi wezincoko angene kwisincoko esinengqiqo kunye nesiphumo, kuya kufuneka abambe ukuhambelana kwenkqubo yokucinga kunye nefuthe.
Yonke into esehlabathini lonke idityanisiwe ngenxa yeziganeko ngokubangela. Isiganeko esinye sivelisa esinye. Intshukumo ifumana impendulo, enokuthi ivelise intshukumo, njl.
Inyani eyenziwe ngabantu, iinqwelomoya kunye nemicimbi inxulunyaniswa nezinto ezizodwa kunye notshintsho ngonxibelelwano lwabo.
Usuku olunesaqhwithi (isizathu esingatshatanga) sinokuba neempembelelo ezahlukeneyo ngobukhulu obahlukeneyo: ukunceda ukubeka ngaphandle kolawulo lomlilo okanye ukukugcina ungadlali i-tennis ngaphandle.
Izizathu ezahlukeneyo kubandakanya inkungu yakusasa, ukutshabalalisa amavili, kunye nokufika kade emsebenzini kunokubandakanya kunokuzisa ingozi yemoto (ifuthe).
Kwimeko apho ufumana nayiphi na ingxaki kwinkqubo yokubhala, ngokuqinisekileyo nxibelelana ne Umbhali wezincoko kwiwebhu kwaye ufumane izincoko simahla.
Inkqubela phambili kwilizwe lonke kwintengiselwano yeemeko kunye neziphumo ezisengqiqweni; Iimbonakalo zesizathu kunye nesiphumo zingabaleka zisemazantsi ekubetheleleni iinzwane zakho kunikezelo njengoKufudumala kweHlabathi.
Yintoni unobangela kunye nesincoko esinefuthe?
Kwimibhalo ebhaliweyo, ingena phantsi kwesambulela sezincoko ezichazayo. Umenzi wezincoko kulindeleke ukuba afumane unxibelelwano phakathi kokuzilolonga okwahlukeneyo kunye nophando olulandelayo kunye novavanyo olunika ingcaciso kubangelwa zizizathu kunye neziganeko.
Abantu abangenabo ubuchule bokubhala bokulinga, bahlala beqala ukuthatha bhala isincoko sam Ndincede. Imibutho emininzi ekwi-Intanethi ibonelela ngezi ntlobo zoncedo ngamaxabiso afikelelekayo.
Esi sincoko sibaluleke ngaphezu kokudibanisa indawo enye kwezi zilandelayo. I-understudy ifuna ukubonisa ukuqondwa kwesifundo ngokuhambisa izizathu kunye neziphumo ezinesizathu esomeleleyo nokuba kunjalo zinokuthi zithintelwe kuyo nayiphi na imeko.
phendula iitemplate zasimahla zasekhaya
Zimbini iindlela zokwenza kunye nezincoko:
Inkcazo enye Iziphumo ezininzi: Apha sivavanya ukubangelwa ziziphumo ezininzi zokurekhoda kwesizathu esingatshatanga.
Izizathu ezininzi-Iziphumo eziNye: Apha sijonga ukubangelwa sisiphumo sedwa esiza ngenxa yezizathu ezininzi.
Ilandela ubume obufanayo bokuyalela:
Inkcazo-ntetho: Kubandakanya ubungqina bethiyori obucacisa eyona nto iya kuphawuleka kuyo.
Ukukhangela isincoko ukunceda kwi-intanethi exhasa ukukhula kwakho kwabafundi? Eyethu Inkonzo yokuBhala yeeNqaku unika i-100% yamaphepha awodwa ayenziwe ngababhali bethu bezincoko.
Imihlathi yomzimba: Isizathu ngasinye kwisiphumo okanye isiphumo sobangela ubudlelwane siya kufumana icandelo elahlukileyo. Isizathu secandelo ngalinye sinokuboniswa ngaphakathi kwesivakalisi sesihloko.
Phelisa: Kuya kufuneka ugxininise kunxibelelwano olubalulekileyo njengokuhlaziya kwakhona ukuthunyelwa.
Nazi iingcinga zomxholo kwimeko apho kuya kufuneka ubhale inkcazo kunye nesincoko esisebenzayo:
Qaphela kwangaphambili iziphumo zeMfazwe yeHlabathi yesiThathu
Yintoni eqale uMzuzu wamaLungelo oLuntu?
Ukulungiswa kocalucalulo kulutsha lwase-Afrika-baseMelika
Yintoni eyamkelekileyo ekuqokeleleni ubuninzi bobutyebi behlabathi kubantu abambalwa?
Kutheni le nto inani labemi kwiinyosi zobusi lincipha?
Kuza kwenzeka ntoni kwihlabathi lonke ngaphandle kweenyosi zobusi?
Iziphumo zokudityaniswa kobisi lwe-oat kokusingqongileyo?
Iziphumo zokulima ubisi
Kuya kwenzeka ntoni ukuba intsimi iye yaba ngumthandi weveggie?
Yintoni ebangela ubhubhane usasazeke kule ndawo?
Iziphumo ebezingalunganga zeshishini lokuhamba kwindibano yendawo
Ngasiphi isizathu esenza abantu basishiye isikolo?
Yintoni eyabeka ukudodobala okukhulu ngo-1930?
Ngaba iimpembelelo ezingapheliyo zoQoqosho oluKhulu luka-2007-2009?
Impembelelo zezibetho kuqoqosho lwehlabathi
Iimpembelelo zokutshatyalaliswa kwamahlathi eAmazon
Iziphumo zokuziqhelanisa nokwenyani kokuqonda
Zithini izizathu zenkcitho eyandisiweyo yokwahlukana ngaphakathi e-US?
Zithini iziphumo zomtshato owoyikisayo ebantwaneni?
Zithini iziphumo ezingapheliyo zeMfundo yaBantwana aBasaqalayo
Iimpembelelo zoxinzelelo olufundisayo kwimpilo-ntle yomfundi
Zeziphi iimpembelelo ezenzakalisayo ezamkelweyo kukuthatha isitayile kwindalo esingqongileyo?
Isizathu kunye neziphumo zeBrexit?
Yintoni eyamkelekileyo kwiChernobyl Nuclear debacle?
Ixesha lisenza njani ukuba sibe bubuthongo?
Iziphumo ezixabisekileyo zokuzila ukutya emzimbeni womntu
Iziphumo zokucamngca kwi-psyche yomntu
Izizathu zokukhathazeka kunye nokudakumba emsebenzini
Impembelelo kaMaryjane kubantu abatshayayo bezikolo eziphakamileyo, kunye neengcebiso zayo ezithe chu phantsi kwendlela.
Iziphumo zokugunyazwa kwentsangu kuqoqosho lwase-US.
Sebenzisa ethembekileyo Ukubhala izincoko kwinkonzo ye-Intanethi kwaye uchithe ixesha elininzi kunye nabo ubathandayo. Masikubhalele isincoko, kwaye siyathembisa ukuba ngekhe uzisole.
ungayithenga njani ithokheni yenyanga
Izixhobo ezinxulumene noko:
Iindidi zesincoko | Isikhokelo esigqibeleleyo sabaQalayo
Imigibe yokuBhala ngokuQhelekileyo kunye nendlela yokuBaphepha
Ingqondo yokugqibela: Isikhokelo saBaqalayo kuBrainstorming kwii-Essays
Iingcebiso ezi-5 zokubhala isincoko esimangalisayo seKholeji
Izincoko ezikhuthazayo: Isikhokelo esilula
Ukukhula kwe-fp python
faka oh zsh ubuntu
Ungazithengisa njani iingqekembe kwi-wallet ethembekileyo
ndilibale igama lam lomsebenzisi we-minecraft
hbo hamba wenze isilling tv